नायीका करिष्मा भन्छिन् क्रिस्चियनले हाम्रो निधारमा लगाउने रातो गौरवको टिकालाई घृणा गर्यो,हाम्रो देवतालाई ढुङ्गा भन्यो’ - Mountain Media
नायीका करिष्मा भन्छिन् क्रिस्चियनले हाम्रो निधारमा लगाउने रातो गौरवको टिकालाई घृणा गर्यो,हाम्रो देवतालाई ढुङ्गा भन्यो’
अहिलेको अवस्थामा२०११ को जनगणना आनुसार हिन्दुको प्रतिशत ८०% above छ हिन्दु धर्म शास्त्र अनुसार सहनु धर्महो भन्ने मान्यता छ । तर हेर्नू होला अबको दुइवाटा जनगणना पछि हिन्दुको संख्या ८% हुनेछ । हाम्रो आर्मी दलको नाम ” जिजस ” दल “मेरि” दल हुनेछ । ( though I respect them because they are somebody’s faith ) मन्दिरहरु १००० वर्ष पछि पुरातत्त्व बिभागले खोज्नुपर्ने हुनेछ । यो नेपालको मौलिकता ,कथा काहानीमा खोज्नुपर्ने हुनेछ !!नेपाल भन्ने एउटा देश थियो जुन स्वतन्त्र थियो ,स्वर्ग थियो तर त्याहाका नेताहरुको कारण आफ्नो अस्तित्व गुमाउन बाध्य भयो । म यो अस्तव्यस्त अवस्थाका कारण यो सोच्न बाध्य भए !!आशा छ ८० % हिन्दुहरुलाई यो सब सहन सक्ने शाहास भगवान पशुपति नाथ ले प्रदान गर्नेछन् ! हर हर माहादेव 🙏
Previous: दुई प्रेमिकासँग एउटै मण्डपमा बिहे
Next: गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बाले पनि पछ्याए ओलीकै कदम,मुख्यमन्त्रीमा फेरि दाबी